China yakakurumidza shanduka prototype yegoridhe yakanamirwa pcb necounter sink sink vagadziri uye vanotengesa | Kangna
Yakajairwa FR4 PCB
Ceramic Yakavakirwa Bhodhi
Heavy Mhangura Bhodhi
High Tg bhodhi
Kurumidza Tendeuka Prototype
yakaoma-flex board ine ENEPIG kupera
Yemakwikwi pcb Mugadziri
inokurumidza shanduka prototype yegoridhe yakanamirwa pcb ne Counter sink hole
Chinyorwa mhando: FR4
Rukoko kuverenga: 4
Min trace upamhi / nzvimbo: 6 mil
Min mugomba saizi: 0.30mm
Apedza bhodhi ukobvu: 1.20mm
Yapedza kukora kwemhangura: 35um
Solder mask ruvara: girini “
Lead nguva: mazuva 3-4
Solder mask ruvara: girini ''
Chikamu chekuratidzira ndiyo yakanyanya kukosha nguva yekutsvaga uye kusimudzira chirongwa.
Kuti kupfupisa kutsvakurudza uye kukura nguva, iwe zvinoda pcb mugadziri kubereka kumumvuri nokukurumidza.
Ipapo iyo yekukurumidza yekuchinja prototype yakabuda.
Zvekugadzira PCB, Kangna ane ruzivo rwekugadzira PCB kweanopfuura makore gumi nemana (kubvira 2006). Kusarudza isu hakugone kupfupisa nguva yekugadzira yePBB chete asiwo kunoderedza mutengo uye kuwana mabhodhi emhando yepamusoro. Tinogona kukupa iwe mhando yemhando yepamusoro ine ipfupi nguva yekugadzira pamutengo wemakwikwi.
Kazhinji, kana yakazara nzvimbo yeako odered pcb isingasviki 0.1 mativi mita, isu tinotora iwo odhiyo semuenzaniso.
Kwete MOQ inogumira, kunyangwe iwe ukahodha imwe PC, isu tinogamuchira iyo odhiyo zvakanyanya.
Iyo yakajairwa nguva yekutungamira ndeye mazuva mashanu kune rimwe chete mativi uye maviri akaturikidzana bhodhi, mazuva manomwe e4 layer, 9 mazuva e6 layer, mazuva gumi e8 layer, 12 mazuva gumi gumi layer board.
Zvekukurumidza prototype, tinogona kupedzisa kugadzirwa kweye prototype yeimwe chete mativi uye maviri dura bhodhi mukati mezuva rimwe kana mazuva maviri, mazuva 3-4 e4 layer, 4-5 mazuva e6 layer, 5-6 mazuva e8 layer, 6 -7 Mazuva e10 layer board.
Izvo zvishoma zuva rekushanda riri, iro rinodhura mutengo.
Mushure mekugamuchira yako odha, mainjiniya edu anoongorora ako maGerber mafaera kuti ave nechokwadi chekuti inoenderana nehunyanzvi kugona kwedu. Kana mafaera apasa kuongororwa, iwe unogona kubhadhara mutengo. Ipapo injiniya wedu anozotarisa zvakare nekukwirisa mafaera kuti agadzire. Dzimwe nguva mumwe mubvunzo weinjiniya unomutsa.
Kuti upedze kugadzirwa nenguva, unofanirwa kupindura mibvunzo yeinjiniya kubva kuna mainjiniya wedu nenguva nekukurumidza.
Iyo nguva yakashandiswa pamubvunzo weinjiniya haina kuverengwa senguva yekugadzira.
Kana iwe ukaraira mushure meP5.00 china nguva, nguva yekugadzira ichaverengerwa kubva zuva rinotevera mangwana.
Pashure: Yakaderera Vhoriyamu yezvokurapa PCB SMT Assembly
imwe chete mativi kunyudzwa goridhe Ceramic yakavakirwa Bhodhi
Yakaderera Vhoriyamu yezvokurapa PCB SMT Assembly
3 oz solder chifukidzo plugging ENEPIG rinorema mhangura b ...
1.6mm inokurumidza prototype yakajairwa FR4 PCB
Resin plugging gomba Microvia kunyudza sirivha H ...
6 rukoko impedance kudzora vanachandagwinyira-flex board ne ...
Kero:4th Floor, Kuvaka A, 2nd West divi, West zheng 2nd Road, Shajiao Nharaunda, Humen Town, Dongguan, Guangdong, China.